Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » IMEX America: Umnyhadala omtsha wokuGxila kuShishino
Abacwangcisi beentlanganiso ezihlanganisiweyo ngoku bandise amathuba okunxibelelana kunye nokwabelana ngamava ngexesha le-IMEX America kule-Novemba. Iziganeko ezibini ezizodwa ziya kubanjwa kumboniso owenzeka ngo-Novemba 9-11 eLas Vegas.
Entsha kulo nyaka kukuGxila kuShishino, kuvuleleke kubacwangcisi benkampani kuwo onke amanqanaba.
Iya kuba nge-Smart ngoMvulo, ixhaswe yi-MPI, nge-8 kaNovemba ka-2021.
Iiseshoni ziya kwenza iingxoxo ezinzulu malunga nemicimbi yangoku kunye nemiceli mngeni efana nolawulo lweqela, uyilo lweentlanganiso, unxibelelwano olusebenzayo nabasebenzi abakude, kunye nempilo yengqondo kunye nokuba sempilweni.
IQonga leNtlanganiso yesiGqeba yintlanganiso yokumema kuphela yabaphathi abaphezulu beenkampani ezivela kwiinkampani zeFortune 2000 kwaye-ezitsha kulo nyaka- UkuGxila kuShishino, ivulekele abacwangcisi benkampani kuwo onke amanqanaba. Ukuthatha indawo ngoMvulo ngoMvulo, onikwe amandla yi-MPI, nge-8 kaNovemba zombini iiseshoni ziya kwenza iingxoxo ezinzulu malunga nemicimbi yangoku kunye nemiceli mngeni efana nolawulo lweqela, uyilo lweentlanganiso, unxibelelwano olusebenzayo nabasebenzi abakude, kunye nempilo yengqondo kunye nokuba sempilweni.
Igqala kushishino lweentlanganiso kunye nomququzeleli onezakhono uTerri Breining uza kukhokela iQonga leNtlanganiso yesiGqeba kunye no-Annette Gregg, uSekela Mongameli oPhezulu, amava e-MPI aza kukhokela i-Corporate Focus entsha. Ifomathi yazo zombini iiseshoni iya kujoliswa kwimfundo yezentlalo, ikhuthaze abazimase ukuba babelane kwaye batshintshisane ngezimvo kwindawo engekho sikweni kodwa yabucala.
UCarina Bauer, iCEO yeQela le-IMEX, uyacacisa: “Ngelixa icandelo lemisitho yeshishini lingumphakathi omnye, iimfuno zamaqela athile kolu luntu zahluke kakhulu kwaye nabacwangcisi bamashishini abekho.
“Sizandisile izibonelelo zethu kubacwangcisi bamashishini kulo nyaka ngokusungulwa kweCorporate Focus ecaleni kweQonga leNtlanganiso yesiGqeba. Zombini iiseshoni zisebenzisana ezintliziyweni zabo, zinika ithuba lokwabelana ngezimvo nokusombulula iingxaki neengcali kunye noontanga abavela kumashishini kwihlabathi liphela. ”
I-Inspiration Hub, ikhaya lemfundo yomgangatho wokubonisa, iyaqhubeka nencoko yomcwangcisi wobumbano ngexesha lomboniso ngeseshoni yokufunda: Incoko yendibaniselwano: Ukuchacha kwakhona okunenjongo kushishino lweziganeko. UBob Bejan, uSekela Mongameli weNkampani, Iziganeko zeHlabathi, iZitudiyo zeMveliso kunye noLuntu lokuThengisa, iMicrosoft kunye noNicola Kastner, VP, iNtloko yeSicwangciso seNtengiso sezeMicimbi eSAP siza kwabelana ngamava abo okuhamba kwiminyhadala yedijithali nangokwasemzimbeni, izigqibo kunye nokusetyenziswa kweentlanganiso , ukutshintsha okulindelweyo kunye neemfuno zabathathi-nxaxheba kumsitho kunye nefuthe kuyilo lomsitho.
Abathengi beenkampani benza iipesenti ezingama-22 zabathengi abangama-3,000 XNUMX ababhalise ngoku IMEX yaseMelika.
IQonga leNtlanganiso yesiGqeba isimemo kuphela sabaphathi abaphezulu beenkampani ezivela kwiinkampani zeFortune 2000. UkuGxila kuShishino ivulelekile kubacwangcisi benkampani kuwo onke amanqanaba. Zombini zenzeka kwi-IMEX America nge-Smart ngoMvulo ixhaswe yi-MPI, nge-8 kaNovemba.
I-IMEX America yenzeka nge-9 ukuya kwi-11 kuNovemba eMandalay Bay eLas Vegas. Ukubhalisa-simahla-cofa Apha.
eTurboNews liqabane leendaba kwi-IMEX.